घडेरी किन्दा ध्यान दिनु पर्ने १० महत्वपूर्ण कुरा - Lalpurza
घडेरी किन्दा ध्यान दिनु पर्ने १० महत्वपूर्ण कुरा
Post author By Moti Raj Gautam
घर बनाउनका लागि कस्तो घडेरी किन्ने ? तपाइले घर बनाउन लाग्नुभएको घडेरी कस्तो हुनुपर्दछ ? अथवा तपाइले घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ र घडेरी कस्तो किसिमको किन्ने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाईँलाई घर बनाउँदा कस्तो घडेरी उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा १० जानकारी प्रदान गर्दैछाैं ।
घडेरी किन्दा ध्यान दिनुपर्ने १० अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू
१. घडेरी सँग जोडिएको बाटोको चौडाइ
सबै भन्दा पहिले त तपाइले घडेरी किन्दै गरेको घडेरीको अगाडी बाटोको चौडाइ कति छ त्यसको बारेमा तपाइ जानकार हुनु पर्दछ । तपाइले किन्ने घडेरीको बाटो कम्तीमा पनि ६ मिटरको बाटो हुनु पर्दछ । अर्थात् ६ मिटरको बाटो छोडेर १.५ मिटरको सेटव्याक छोड्न पुग्ने गरी निर्माण हुने घरका लागि पर्याप्त जग्गा हुनु पर्दछ । यदि तपाइको घडेरी र बाटोको नाप जाँच गर्दा बचेको जग्गा घरका लागि पर्याप्त हुँदैन भने घर निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
२. न्यूनतम क्षेत्रफल र मोहडा
तपाइले किन्न घर निर्माण कालागि किन्न लागेको जग्गा वा घडेरीको न्यूनतम क्षेत्रफल कति छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । घर निर्माणका लागि घडेरीको न्यूनतम साढे दुई आना २.५ आना वा ६ धुर हुनु पर्दछ । साथै जग्गाको मोहडा कम्तीमा १८ फुटको वा ६ मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन । १८ फिट भन्दा कम मोहडा भएको घडेरी उपयुक्त मानिँदैन ।
३. जग्गा कति भिरालो छ ?
तपाइको जग्गा कत्तीको भिरालो छ त्यसले घरको निर्माण मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यदि भिरालो जग्गामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने निर्माणको लागत मूल्य बढी पर्न जान्छ । तसर्थ घडेरी किन्दा समथर जमिनमा किन्नुहोला ।
४. जग्गाको ढल निकासको प्रावधान
तपाइको जग्गामा ढल छ कि छैन अथवा तपाइको जग्गामा पानीको निकास हुने प्रावधान छ कि छैन ? तपाइको घडेरी खोँचमा छ वा बाटोको लेभल भन्दा तल छ भने त्यहाँ पानीको निकास गराउन कठिन हुन्छ । तसर्थ घडेरी किन्दा ढल निकासको अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर मात्र खरिद गर्नुहोला ।
५. बाटोको र जग्गाको सतह
तपाइको जग्गा बाटोबाट कति माथि छ अथवा जग्गा कति लो ल्यान्डमा छ त्यो विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । जग्गा बाटोको सतह वाट जति तल भयो त्यति नै घर निर्माणको लागत धेरै हुन जान्छ । अर्को कुरा यदि जग्गा सिमसार क्षेत्र वा बर्खाको समयमा डुबान पर्ने क्षेत्रमा त पर्दैन त्यो ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । बाटो बाट जति बढी तल जग्गा छ त्यति धेरै बाटोको सतह सम्म उठाउनु पर्ने भएकोले घर निर्माण महँगो पर्न जान्छ ।
६. जग्गाको कानुनी पक्ष
तपाइले किन्न लाग्नुभएको जग्गाको कानुनी प्रावधान के के छ त्यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ । त्यो जग्गाको लालपुर्जा, ब्लु प्रिन्ट नक्सा, फिल्ड नक्सा सबै यकिन गरी हेर्नु पर्दछ । ब्लु प्रिन्ट नक्सा र वास्तविक जग्गा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा जग्गाको बनावट १० देखि १५ प्रतिशत सम्म मिलेको छैन भने तपाइले नापी कार्यालयमा गई नाप जाँचको व्यवस्था गरी यकिन गरेर मात्र किन्नु पर्दछ । तपाइले किन्न लागेको जग्गाको नक्सा वरपर कुलो, राजकुलो वा गोरेटो बाटो हुन सक्दछ । जुन तपाइले किन्न लागेको जग्गामा नदेखिन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा तपाइले ख्याल गरी नक्साको ब्लु प्रिन्ट वा कुनै प्राविधिकको सल्लाह अनुसार यकिन गर्न सक्नुहुनेछ । यो सँग सँगै तपाइले किन्न लाग्नु भएको जग्गा को व्यक्तिबाट कसरी पास भएर आएको छ यकिन गर्नु पर्दछ । जग्गा गुठीको हो वा व्यक्तिको हो यकिन हुनु पर्दछ ।
७. बिजुलीको प्रसारण लाइन
तपाइले किन्न लागेको जग्गाको वरिपरि हाई टेन्सन लाइन छ कि छैन यकिन गरी किन्नु पर्दछ । तपाइको जग्गाको छेउछाउमा हाई टेन्सन लाइन छ भने ३ वटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो हाई टेन्सन लाइन ११ के.भि.ए. भन्दा थोरै छ भने त्यो हाई टेन्सन लाइन वाट १.५ मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ । यदि ११ देखि ३३ के.भि. ए. सम्मको छ भने हाई टेन्सन लाइनबाट ३ मिटर छोड्नु पर्दछ । ३३ के.भि.ए.को लाइन भएको अवस्थामा सेन्टर वाट १५ मिटर टाढाको दुरीमा मात्र संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । जग्गा माथिबाटै हाई टेन्सन छ भने त्यो जग्गा नकिन्नुहोला ।
८. नदी वा खोला किनार
तपाइको जग्गा खोलाको किनारमा छ भने खोलाको प्रकृति हेरी १० देखि ६९ मिटर सम्म छोड्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाइले किन्न लागेको जग्गा खोला किनारमा भए यी कुरा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि जग्गा खोला किनामा भए नापी वा नगरपालिकामा गएर राम्रो सँग बुझ्नु पर्दछ ।
९. जग्गा कुन जोनमा पर्दछ ?
कहिलेकाहीँ जग्गा किन्दा हामी हतारमा किन्छौ र किने पछि मात्रै थाहा हुन्छ कि यो क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा पर्दो रहेछ जसले गर्दा आफूले चाहे अनुरूपको संरचना निर्माण गर्न नपाउने रहेछु। त्यस कारण तपाइले नगरपालिकामा गएर तपाइले किन्न लाग्नु भएको क्षेत्र आवासीय, मिश्रित, व्यावसायिक, प्लानिङ, स्मार्ट सिटी वा त्यो क्षेत्रमा कुनै परियोजना आउँदै छ यकिन गर्नु पर्दछ । त्यस कारण तपाइले किनिसकेको जग्गामा तपाइले आफ्नो इच्छा अनुरूपको संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्दछ । सामान्यतया बसोबासका लागि निर्माण गरिने घरमा समस्या नआएता पनि अन्य संरचनाका लागि भने यकिन गरेर मात्र किन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१०. जग्गाको मोहडा
सामान्यतया जग्गाको मोहडा कुन दिशामा उपयुक्त हुन्छ त्यो भौगोलिक स्थान अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ । तराइ क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने घर चिसो रहिरहने किसिम बाट निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण घामको विपरीत दिशामा घरको मोहडा बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा घर सामान्यतया चिसो रहन्छ । यदि तराइमा घर निर्माणका लागि जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर फर्केको जग्गा उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै चिसो ठाउँमा भने घर लाई घाम तर्फ फर्काएर निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा घर तातो रहन्छ । काठमाण्डाै तथा पहाडी चिसो क्षेत्रमा पूर्व वा दक्षिण फर्केको राम्रो मानिन्छ ।
तपाइ घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ र घर निर्माण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने माथि उल्लेखित मुख्य १० कुरालाई मध्यनजर गरी किन्नुहोला । केही द्विविधा भए नजिकको नगरपालिकाका प्राविधिक तथा इन्जिनियरको सल्लाह बमोजिम खरिद गर्नुहोला ।
← घर बनाउँदा पालना गर्नु पर्ने नगरपालिका का ५ महत्त्वपूर्ण नियमहरू → वास्तु अनुसार घर निर्माण गर्दा जान्नै पर्ने १२ तत्थ्यहरू
घर बनाउनका लागि कुन जग्गा उपयुक्त होला ? कसरी थाहा पाउने ?
वास्तु अनुसार घर निर्माण गर्दा जान्नै पर्ने १२ तत्थ्यहरू
घर बनाउँदा पालना गर्नु पर्ने नगरपालिका का ५ महत्त्वपूर्ण नियमहरू
घर निर्माणमा ACC Block वा इँटा कुन प्रयोग गर्ने?
© 2022	Lalpurza